फोटो अन्तर्गत भिन्नता, लेजर र आइस कूलि Hair कपाल हटाउने-प्राविधिक जानकारी-शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
फोटो अन्तर्गत भिन्नता, लेजर र आइस कूलि Hair कपाल हटाउने
समय: 2021-01-14 हिट्स: 4
जिओ नुओले कपाल हटाउने बारेमा धेरै कुरा प्रस्तुत गरेको छ। मलाई विश्वास छ कि तपाइँ यसको बारे मा केहि थाहा छ। तर कपाल हटाउने विधि बिभिन्न हो जस्तै फोटो कपाल हटाउने; लेजर कपाल हटाउने; बरफ चिसो कपाल हटाउने आदि।
त्यसोभए उनीहरू के हुन्छन्? एक नोट बनाउन हतार गर्नुहोस्, जिओ नुओ तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्दैछ!
फोटोन कपाल हटाउने:
फोटोन कपाल हटाउन आईपीएल कपाल हटाउन पनि चिनिन्छ। आईपीएल फोटोन कपाल हटाउने एक तीव्र स्पन्दित प्रकाश हो। यसको तरंगदैर्ध्य 475 1200-१२००nm प्रकाश हो। कपाल हटाउने प्रभाव परम्परागत कपाल हटाउने विधिहरू भन्दा पारदर्शी हुन्छ (परम्परागत कपाल हटाउने विधिहरू जस्तै रेजरहरू, कपाल हटाउने क्रीम, गोमांस आदि)। कपाल हटाउने को साथमा, हाम्रो छाला तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन सक्छ। प्रकाशले छालालाई कपालको कपालमा छिर्दछ। कपालको फोलिकुलले मेलानिनको प्रकाश कारण ग्रहण गर्दछ र यसलाई तातो ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ। तातो कपाल follicle एक सुस्त स्थिति प्रवेश गर्नेछ। कपाल हटाउने को प्रभाव प्राप्त गर्नुहोस्।
लेजर कपाल हटाउने:
लेजर कपाल हटाउने सिद्धान्त आईपीएल कपाल हटाउन जस्तै छ। ती दुबैले छालामा प्रवेश गर्न प्रकाशको प्रयोग गर्छन् र कपाल हटाउनको प्रभाव प्राप्त गर्न कपालको कपालहरू बिगार्दछन्। भिन्नता लेजर कपाल हटाउने उर्जा आईपीएल कपाल हटाउने भन्दा धेरै बलियो छ। कपाल हटाउने प्रभाव राम्रो हुनेछ। तर लागत धेरै बढी छ। लेजर कपाल हटाउने सामान्यतया अस्पताल र ब्यूटी सैलुनमा प्रयोग गरिन्छ, र अपरेटरहरू व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए।
बरफ चिसो कपाल हटाउने:
बरफ चिसो कपाल हटाउने माथिका दुई कपाल हटाउने विधिहरूमा आधारित छ। यो नरम, कम पीडादायी र छिटो हुनेछ। जब कपाल हटाउने क्षेत्र बढ्छ, यसले उपचार समयलाई छोटो पार्छ। यसले कपाल हटाउने प्रक्रियालाई कम पीडादायी बनाउँदछ। बरफ कूलि hair कपाल हटाउने र परम्परागत लेजर कपाल हटाउने बीच संयन्त्र मा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता यो छ कि परम्परागत लेजर कपाल हटाउन तत्काल उच्च ऊर्जा जलिरहेको कपाल follicles को आवश्यकता छ, तर बरफ चिसो सेयर कपाल स्वचालित रूपमा निष्क्रिय हुन्छ, त्यसैले यो अत्यधिक बिना Depilation को उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पीडा र जोखिमबाट बच्न छालालाई जलन गर्ने।
केश हटाउन हामी कुन विधि प्रयोग गर्छौं त्यसले फरक पार्दैन, हामीले हाम्रो विभिन्न सर्तहरूको आधारमा छनौट गर्नुपर्नेछ, त्यहाँ एक विधि छ जुन हामीलाई उपयुक्त छ।
अघिल्लो: के गर्ने यदि तपाइँ लेजर कपाल हटाए पछि घाइते भयो
अर्को: कपाल हटाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो मौसम